ukuthuthukiswa Cryptocurrency emakethe e 2018 - Blockchain Izindaba
Januwari 7, 2018 admin
ukuthuthukiswa Cryptocurrency emakethe e 2018
Ngenxa ukwethulwa bitcoin ikusasa nemikhiqizo phezu bendabuko isitokwe Ukuhwebelana; ukusungulwa phezu 100 uthango izimali ukuthi ukudayisa cryptocurrencies; futhi cryptocurrency emakethe ofeleba ukufinyelela ezingaphezu kuka $500 billion ngonyaka 2017, ochwepheshe ngobulungisa bakholelwa ukuthi cryptomarket zamanje isibe zikhula esheshayo futhi umkhakha ethembisayo isizukulwane sethu. Siye bahlangana ukubukwa nokuqagela lochwepheshe kanye umkhakha abamqoka ku ukuthuthukiswa cryptocurrency emakethe e 2018.
imicabango yabantu Isazi
I-CEO ye Node40, a blockchain wezokuBusa ngokuBambisana cryptocurrency intela ukuhambisana inkampani, Perry Woodin ukholelwa ukuthi 2018 kuyoba unyaka ukuqaphela mass umphakathi ngoba cryptocurrency.
It kuzoba unyaka lapho zonke umngani isihlobo uyofuna ukwazi ukuthi kungakanani kufanele nendlela ukuthenga ke, Woodin uthi.
Akungabazeki kuyoba ukwanda isibalo sabantu usebenzisa cryptocurrencies. Jonathan Sela, ukuthuthukiswa SVP zebhizinisi zasesiteji ngu YouNow, esebenzisa blockchain ukwakha isimo semvelo abezindaba, ilinganisela ukuthi ekupheleni 2018, sizobona phezu 50 abantu abayizigidi ezingu-emhlabeni wonke ebambe okungenani oyedwa cryptocurrency. Nakuba ucwaningo olusha iLondon Block Exchange (LBX) Uphethe ngokuthi ekupheleni 2018 oyedwa millennials ezintathu ngeke etshaliwe ku mfihlo emakethe.
Isinqumo bendabuko isitokwe Ukuhwebelana CBOE futhi CME zokukleliswa bitcoin ikusasa nezinketho izinkontileka wenza cryptocurrency wokuqala emhlabeni futhi, cishe ngokushesha, nezinye cryptocurrencies, isigaba amafa amasha afana izinsimbi eziyigugu, amandla nezinto, izibopho kahulumeni, nezinye izinto eziningi kanye izibambiso. Ngakho, ngonyaka ozayo isikhundla cryptocurrencies kuyoba esisemthethweni ngaphezulu uhlelo lwezimali kanye zomthetho ezikhona. Simon Yu, CEO StormX, ukwabelana lesi sitatimende. Abeciniseka ngekutsi 2018 kuyoba omunye iminyaka kangcono cryptocurrency futhi ibenze emakethe ezingeni elisha.
Kuze kube manje ubelokhu zimali ngokuyinhloko okudayisa baphokophelele intengo bitcoin nezinye cryptocurrencies. With ikusasa lezimakethe nezinketho ukunciphisa iphrofayli ingozi, ngaphezulu zimali yesikhungo ekugcineni bakwazi ukuqala ukweqa e. Kodwa nge kwezezimali, sabona izigidigidi zamaRandi yesikhungo imali flow eminyakeni embalwa ezayo.
Shidan Gouran, UMongameli Global Blockchain Technologies, ngokungangabazeki ukuthi cryptocurrency uzobona impumelelo okukhulu nakakhulu emkhathizwe e 2018.
“Nakuba amaphesenti abalulekile sabantu kwabathengi noma usebenzisa noma, okungenani, ukhululekile cryptocurrencies, okufanayo Awukwazi ishiwo ohulumeni kanye nezikhungo. Lokhu kulindelekile, nezinhlangano, kokubili komphakathi kanye nezinkampani ezizimele, bavame ukuba eside yokufunda Curves e nokusebenzisa izindlela ezintsha. Thina unomuzwa wokuthi lokhu ijika yokufunda kuyoba ebalulekile cryptocurrency futhi blockchain intuthuko 2018, zokunqoba eziningi zezingqinamba eziye kuvinjelwe ukuzibandakanya komphakathi kanye zezikhungo kule sithombe. Lokhu kuzoletha wonke umuntu ungene ekhasini elilodwa, ekwandiseni kakhulu ikhono nobuchwepheshe iqhaza izinhlangano abanethonya, uvula ukusebenza ebandleni bekungekhe kukghonakale ngenye. Phakathi baqhubeka utshalomali zezikhungo kule cryptocurrencies, ke umnikelo wa-futures bitcoin ezisekelwe, futhi ohulumeni ekuqaleni ukusebenza kumaphrojekthi yabo blockchain, khona kakade izimpawu zalezi ubuchwepheshe ekubambeni ku emazingeni womphakathi izikhungo. Thina, Ngakho-ke, ukubikezela ukuthi 2018 uzobona ukukhula ukwamukelwa okuqhubekayo kanye, ukwakha inqubekela phambili ekhona samanje uma zamukela abathintekayo entsha”.
Ngokwe-CEO Biddable Mark Lurie, abatshali bezimali abaningi sizogxila cryptocurrencies okunye, kuhlanganise litecoin, dash, futhi iota, kunokuba bitcoin noma ether. Lurie ukholelwa ukuthi nokutshala izimali, e 2018, lapho kuzoba push eqinile ngase cryptoassets tshala nokuphathwa mfihlo utshalomali izophathwa ngendlela zimali ukubheka izimpahla bendabuko kanye nokutshala izimali.
Mike uvumelanise, CEO of the Crypto Inkampani, waphawula ukuthi simo esishubile kancane Bitcoin ngabe nomthelela ku cryptocurrencies nehlukile futhi sizophinde ukubona ukwanda izibambiso amathokheni. Uyabikezela cap emakethe $5 isigidintathu ekupheleni konyaka.
Dmitriy Zhulin, WabaSunguli of ins Ecosystem, ulindele ukuthi njengoba blockchain ubuchwepheshe uyaqhubeka ukuba balolonge, bitcoin iyokhula cishe $30-40,000 e 2018 esekelwe lula yayo kanye ukutholwa okwengeziwe njengoba yokukhokha kanye capital ukulondolozwa. Ngaphezu kwalokho, Trevor Koverko, uMongameli we-Canadian inkampani Polymath, ukholelwa ukuthi Bitcoin kuzovela njengomunye inethiwekhi yokukhokha.
“Okwamanje Bitcoin lisetshenziswa njengedivaysi ifa zokucabangela kanye nokugcina lenani. Kodwa njengoba ukunciphisa izixazululo like inethiwekhi umbani ziyaphuma ( inethiwekhi Bitcoin ezisekelwe, evumela abasebenzisi ukuba enze isibalo esingenamkhawulo micropayments - DeCenter), Umbuso indawo bitcoin sika kakhulu ukwandisa kanye intengo yayo. Umbuzo wangempela uwukuthi ngeke kube bitcoin 'uchungechunge main’ lowo isibindi ukuba bamukele lezi ngcono noma eyokwenza kube omunye uchungechunge njenge Bitcoin Cash?”
ukuthuthukiswa Cryptocurrency emakethe
Zonke Cryptocurrencies ...
Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 2
Bacabanga ukuthi ...
Thumela Landelayo:Kusho ubuchwepheshe blockchain kwakhula kanjani 2018?
Crypto Izindaba 18.10.2018
Blockchain Izindaba 17.10.2018
Blockchain Izindaba 16.10.2018
Blockchain Izindaba 15.10.2018